L3 + Gbanye Manufacturers & Suppliers - China L3 + Gbanye Factory
DCN CS6200-EI ọla kọpa usoro switches bụ ndị na-esote 10G stackable ntụgharị ụzọ na-enye ohere gigabit na ọdụ ụgbọ elu 10GE. CS6200-EI ọla kọpa mgba ọkụ nwere elu ngwaike na software ije imewe. Mgbanwe ndị a na-enye nnweta dị elu, scalability, nche, arụmọrụ ike, na ịdị mfe nke ọrụ yana njirimara bara ụba dịka VSF (Virtual Switch Framework), IEEE 802.3at nhọrọ na enweghị ike ọkọnọ. Ọ dị mma maka mkpokọta dị elu ma ọ bụ isi akwa ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fiber Gbanye
DCN CS6200-EI eriri usoro switches bụ ndị na-esote 10GbE na-agbanwe usoro ntụgharị na-enye ohere gigabit ngwa anya na ọdụ ụgbọ elu 10GbE. CS6200-EI eriri mgba ọkụ nwere elu ngwaike na software ije imewe. Mgbanwe ndị a na-enye nnweta dị elu, scalability, nche, arụmọrụ ike, na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ yana njirimara bara ụba dịka VSF (Virtual Switch Framework), ikike na-enweghị isi. Ọ dị mma maka nchịkọta ngwa ngwa dị elu na ngwọta FTTx ma ọ bụ ca ...
CS6200-52X-P-EI Dual Stack 10G 48 Ports PoE Ethernet Gbanye
CS6200-52X-P-EI 10G nke na-ebugharị ntụgharị PoE nwere ngwaike ngwanrọ na nhazi ụlọ sọftụwia. CS6200-52X-P-EI na-enye nnweta dị elu, scalability, nche, arụmọrụ ike, na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ yana njirimara bara ụba dịka VSF, IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt na enweghị ike ọkọnọ. Ọ bụ ezigbo maka elu-njupụta nchịkọta ma ọ bụ isi oyi akwa na kampos netwọk ma ọ bụ SMB netwọk. Key Key na Isi 60W PoE ọdụ ụgbọ mmiri 8 PoE mbụ na-akwado IEEE 802.3bt (60w). Ha nwere ike ịbụ ...
CS6200-28X-HI-24F High Performance 10G Full Fiber Ethernet Gbanye
CS6200-28X-HI-24F nke na-esote 10G ntụgharị ntụgharị ntụgharị nwere ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ nke ngwanrọ, wuru 1 + 1 modul dị ike. CS6200-28X-HI-24F na-enye nnweta dị elu, scalability, nche, arụmọrụ ike, na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ nwere njirimara dị ike dịka VSF (Virtual Switch Framework), enweghị ike na-enye ọkụ na OpenFlow. Ọ dị mma maka mkpokọta nnukwu mkpokọta ma ọ bụ isi mkpuchi maka netwọkụ kampus, ISP, na ụlọ ọrụ. Key Atụmatụ na Highl ...
CS6200-8G24S2Q-EI Dual Stack 40G Ethernet Routing Fiber Gbanye
DCN CS6200-8G24S2Q-EI bụ L3 ntụgharị ntụgharị ntụgharị na ọdụ ụgbọ mmiri 40GE. CS6200-8G24S2Q-EI emeela ngwaike ngwaike na nghazi ihe ngwanrọ, wuru na akụrụngwa abụọ ejighi oru. CS6200 na-enye nnweta dị elu, scalability, nche, arụmọrụ ike, na ịdị mfe nke ọrụ yana njirimara ọhụụ dịka VSF (Virtual Switch Frame-work) na 3 na-edozigharị ngalaba na-edozi onwe ya. Ọ dị mma maka nnukwu aggregation na netwọkụ Enterprise ma ọ bụ netwọọdụ Campus. Maka SMB, CS62 ...